के हो 'बजेट होलिडे'? यसमा सरकारी खर्च कसरी हुन्छ ? - Netizen Nepal
के हो ‘बजेट होलिडे’? यसमा सरकारी खर्च कसरी हुन्छ ?
in मुख्य समचार, राजनीति, समाचार
काठमाडौँ, ३० भदौ । सांसदहरुको अवरोधका कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित हुन नसकेपछि सरकारले गर्ने खर्चमा बन्देज लाग्ने भएको छ । गत जेठ १५ गते केपी ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटको समयसीमा भदौ ३० गते सकिएको छ । उक्त बजेटलाई परिमार्जन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ २५ गते प्रतिस्थापन विधायकमार्फत बजेट ल्याएका थिए । बजेट पारित गर्नका लागि बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक नेकपा एमालेको केपी ओली पक्षले गरेको अवरोधका कारण स्थगित भएको थियो । सभामुखले प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक असोज ४ गतेका लागि तय गरेका छन् । तर चार गतेको बैठकमा नै बजेट पारित हुने निश्चित छैन ।
समयमा बजेट पारित नभएपछि संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक र उनीहरूको कार्यालयमा हुने प्रशासनिक खर्च समेत रोकिने भएको छ ।
सञ्चित कोषको दायित्वमा नपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब अन्य सरकारी कर्मचारीहरूको सरह रोकिने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका कार्यालयमा हुने प्रशासनिक खर्च पनि बजेट पारित नहुँदासम्म सरकारले निकासा गर्न सक्दैन।
बजेट पारित ढिलो हुँदा सरकारी कर्मचारीहरूको तलब, पूर्वकर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका खर्चहरू तत्कालका लागि प्रभावित हुने बताइएको छ ।
संविधानको धारा ११८ ले सङ्घीय सञ्चित कोषबाट हुने नौवटा शीर्षकमा हुने खर्चका लागि भने संसद्को स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसअन्तर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, न्यायपरिषद्का सदस्य, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष लगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सरकारले भुक्तानी गर्न सक्छ । उनीहरूको कार्यालयमा हुने प्रशासनिक खर्च पनि कोषबाटै हुने भएकाले नरोकिने व्यवस्था छ ।
संसद्‌बाट बजेट अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी समयसीमाभित्र बजेट पारित नभएपछि सरकारलाई सीमित विषयमा बाहेक खर्च गर्न बन्देज लागेको शुन्य अवस्थालाई नै ‘बजेट होलिडे’को नाम दिइएको छ ।
अब बजेट पारित नहुँदासम्म सञ्चित कोषबाट व्ययभार पर्ने बाहेकका शीर्षकमा सरकारी कार्यालयहरूले कुनै पनि खर्च गर्न नपाउने अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार विपद् लगायत अत्यावश्यक क्षेत्रमा हुने खर्च भने सम्बन्धित कामका लागि बनाइएका कोषबाट गर्न सकिन्छ । बजेट खर्च गर्ने कानुनी हैसियत सरकारले नबनाउँदासम्म बजेट शून्यताको जटिलता कायम रहने जानकारहरुले बताएका छन् ।
मंगलबार पत्रकारहरुको जिज्ञासामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केहिदिन बजेट रोकिन सक्ने बताउनुभएको थियो । नेपालमा बजेट खर्च गर्न नमिल्ने अवस्था आएको यो पहिलो पटक हो ।
बजेट पारित नहुन्जेलका लागि सरकारी कार्यालयहरुले उधारोमा काम चलाउन सक्ने पनि विज्ञहरुको भनाइ छ । तर उधारोले काम चलाउने कुरा त्यति सहज भने देखिंदैन । नियमित कामकाजका क्षेत्रमा ठूलो असर नपरे पनि विकास निर्माणका क्षेत्रमा छुट्टाइएको बजेट खर्च गर्न संसद्‌बाट बजेट पारित नहुँदासम्म सबै काम ठप्प हुनसक्ने खतरा रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
Tags: बजेट शुन्यताबजेट होलिडेसंसद